Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 28/08/2020)
Lolu hambo ubona swath enkulukazi Italy, njengoba kuthatha wena kusuka Milan yonke indlela kuze kufike esihlokweni selinye ukuqalisa wezwe. Endleleni uzothola iziphikisi ezishisayo zogu lolwandle namagquma aseTuscany. Lokhu, kunjalo, ngaphezu kwezithombe ezibunjiwe zaseRoma nomlando wazo.
Lokhu umzila abadumile siphela izikhathi eziyisithupha ngesonto. Abizwa nangokuthi ama-Caledonian olele, le sevisi olele amamiksi kanokusho izindleko ukusebenza. Ungathola amadili ezifaka ukudla, iziphuzo, futhi yebo, amakhabethe okulala.
Nakuba ungeke uthole ingalali berths eziphelele ngale isitimela, uzothola umzila wobusuku obukhona nsuku zonke. Lezi kuzokuvumela ukushiya ebusuku futhi ufika ekuseni ngiqabuleke ngoba usuku ukuza. Ukuze uthole isipiliyoni esihamba nodwendwe non-olele, ungafuna ukubambela amathikithi unqambothi. Lezi amathikithi ngokuvamile ihambisane ozitholayo anda ezifana wemithwalo esengeziwe, ukudla kuhlanganisiwe, kanye nolwazi lwami lwangasese olwengeziwe.
Lapho uhamba kulo lonke I-Europe ngesitimela udliwe ngokuphelele ukuba uzikhethele. Noma ngabe eScotland noma Spain, Norway, noma Sweden, olele izitimela ezinye izinkonzo best azungeze sokufika ngakusasa beqabulekile futhi isilungele usuku lwakho ukuza. Nakuba une plethora ezikhona kuwe, njengehhotela lesitimela noma izitimela ezalala ubusuku bonke ezitimela ezinde zasePrague, Poland, Lisbon noma eMoscow, zisize umusa hit lezi izitimela eziyisithupha eziphezulu olele eYurophu esikhundleni. Ngeke sorry!